Ibhizinisi Lokucwaninga Ngezwi | Martech Zone
Lokhu is Okuthunyelwe Okuxhasiwe. Ngenani lesilinganiso senjini yokusesha liphezulu kakhulu, akumangalisi ukuthi amathuluzi wokucwaninga aqhamuka yonke indawo kuwebhu. Ngisebenzisa I-WordTracker kubhulogi yami, ngoba ine-plugin elula ukuyisebenzisa yokuthola amathegi amahle kakhulu kokuthunyelwe kwakho ngakunye.
Ngiyazi ukuthi i-SEOmoz inamagama ambalwa angukhiye namathuluzi emisho angukhiye ngaphakathi kokuqukethwe kwayo kwe-premium, angikwazi ukufakazela izindleko ngo- $ 49 ngenyanga kubhulogi lami elincane.
IZwi ngicele ukuthi ngenze okuthunyelwe okuxhasiwe kwebhulogi kubo futhi nganginomdlandla wokufunda kabanzi ngalo mkhakha. I-Wordze inephakheji yokubhalisa engu- $ 45 ngenyanga futhi kubonakala sengathi ineqoqo lamathuluzi eliqinile kunawo wonke engake ngawabona maqondana nocwaningo lwegama elingukhiye:
Nalu uhlu lwezici namathuluzi ozowathola ku-Wordze:
Ithuluzi Lokucwaninga Lamagama Asemqoka - lena yinjini lapho ungafaka khona amagama nemisho bese ibuya nomlando, inkomba, izinga, ukubala, nokunye analytics amathuluzi ahambisana nomusho neminye imishwana efana nayo.
Ngenisa amagama angukhiye - uma ungungqondongqondo ebhizinisini, kungenzeka ukuthi ufeze ucwaningo oluthile ngamagama asemqoka esikhathini esedlule. I-Wordze ikwenze kwaba lula kuwe ukungenisa amanye amagama akho angukhiye ohlelweni lwabo.
Landa Imiphumela - iyazichaza.
Keyword API - lokhu ngamandla aqinile API ukuhlanganisa i-Wordze ohlelweni lwakho lokuphathwa kokuqukethwe noma uhlelo lokusebenza. Kuyangijabulisa lokhu - ngingajabula ukubona umuntu ehlanganisa isihleli esifaka iziphakamiso zamagama asemqoka njengoba ubhala.
Ukuphutha okungukhiye kwegama elingukhiye - Leli isu elilahlwa kakhulu. Uma ngimake isiza sami nge 'marketig technology blog'futhi'ukumaketha ibhulogi yezobuchwepheshe'noma nje i-marketig ne-tecnology kakhulu, ngingabamba ithrafikhi enkulu amanye amasayithi okungenzeka angayinaki!
Ucwaningo lwegama elingukhiye lomlando - ukubukeka okuthakazelisayo kwamathrendi wamagama asemqoka nemisho
Ucwaningo Lwezinjini Zokusesha - ithuluzi elihle lokumba ngokujule emiphumeleni yenjini yokusesha nokuthola ukuthi amanye amasayithi enzelwe ini.
Amaphrojekthi - uma wenza ucwaningo kumaphrojekthi amaningi, uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi uhlele amagama akho angukhiye kumaphrojekthi wokufinyelela okusheshayo kumathuluzi ngamunye.
I-Website Check - ithuluzi elipholile lapho ungafaka khona i-URL yekhasi bese uthola umbiko kuwo wonke amagama angukhiye nemishwana, kanye nekhono lokumba ngokujule ngakunye ukuze uhlaziye ngokuqhubekayo.
I-Thesaurus - I-Wordze ibuye ibe nethesorasi enamandla lapho ungaxhuma khona igama elingukhiye uphinde uthole amanye amagama angukhiye owasebenzisayo, awusizo kakhulu uma ufuna ukwakha okuqukethwe okwenzelwe ukushayela i-Search.
Ukubheka kwe-WordRank - thola ukuthi ngubani ophethe amagama asemqoka ozama ukuwashayela.
Ukulanda - ikhono lokukhipha lonke ucwaningo lwakho lwegama elingukhiye.
Ama-FAQ - Imibuzo Ebuzwa Njalo - lokhu kuwufanele isisindo sawo ngegolide, lezi zingxenye ziphendula yonke imibuzo ongayithola ku-Keyword Research.
Amavidiyo - awukuthandi ukufunda? Laba bantu baze bashicilela amavidiyo kuwo wonke amathuluzi abo nokuthi ungawasebenzisa kanjani ngokugcwele!
Futhi-ke, i-Wordze inikeza uhlelo lokuhambisana!
Ngokombono wami othobekile, isici esimnandi kunazo zonke se- IZwi yinhlangano yamathuluzi nokulula ukuyithola nokuyisebenzisa. Ayisihle njengamanye amathuluzi laphaya, kepha akudingeki ukuthi ibe - lokhu ukucwaninga kwamagama ngenxa yobuhle!
Yini engayisebenzisa i-Wordze? Wonke amathuluzi mahle ngokumile - chofoza, shicilela, chofoza, shicilela. Ngingathanda kakhulu ukubona amandla wokuhlunga ama-grids futhi ngamandla akhiqize amashadi futhi ahlunge uhlu. Isibonelo, ukube benginedrayivu yamagama asemqoka eqale ngoMashi 15th, bengizofuna ukwenza ukuhlaziywa ngaphambi kuka-Mashi 15 kanye nangemva kuka-Mashi 15 kukho konke ukuhlaziywa kwami ​​nokushadi.
Tags: abaphathi bewebhu be-googlemavenlinkumabhebhanaUkuphatha iphrojekthiimiphumela yezokuxhumanaukuphathwa komsebenziukwenzaokufanele ukwenzetpiazzai-wunderlist
Feb 6, 2008 ngo-11: 53 AM
Kade ngisebenzisa i-Wordze entweni eyodwa noma enye cishe izinyanga eziyi-6 manje. Ngikuthola kuwusizo kakhulu futhi ngivumelana ngenhliziyo yonke neziphakamiso zakho futhi.
Feb 6, 2008 ngo-1: 45 PM
Kungani ungangingenisi kulezi zimfihlo, Julie? 🙂
Feb 7, 2008 ngo-9: 21 PM
Ulwazi oluhle kulokhu okuthunyelwe. Ngifunda nje ngokulandela ngamagama angukhiye ne-SEO. Ingabe bezibuza ukuthi le plugin ungayithola kuphi i-Wordtracker, futhi ingakanani? Ngiyabonga.
Feb 7, 2008 ngo-9: 29 PM
Sawubona, futhi ungasebenzisa i-KeywordSpy ocwaningweni lwakho lwegama elingukhiye.